IZIPHUMO ZE-X FACTOR 2018: NGUBANI OSHIYE IVEKI EPHELILEYO? ULUHLU OLUPHELELEYO LWABANGENELELI KUNYE NEZENZO ZOKUSHIYA UKHUPHISWANO LWE-ITV-IRADIO TIMES - IMIBONISO YEETALENTE
Ngubani ongaphandle kwe-X Factor 2018? Uluhlu olupheleleyo lwabadlali abangenisiweyo
Ukusuka kumawaka abaphicotho-zincwadi okokuqala, zizenzo ezili-16 kuphela ezenze ukuba kuboniswe i-X Factor show, ezine zivela kuBafana (baqeqeshwa nguLouis Tomlinson), Amantombazana (uSimon Cowell), iOvers (i-Ayda Field) kunye namaQela (uRobbie Williams ).
Nangona kunjalo, inye kuphela yabokugqibela abagqityiweyo abanokuza phezulu, kunye nezenzo ezili-15 ezimiselweyo ukuba zithunyelwe ekhaya kukhuphiswano kwiiveki ezizayo (okanye ubuncinci banyanzelwe ukuba bajonge eqongeni ngelixa ophumeleleyo efumana ukuthandwa).
Kodwa ngubani oye kude kangaka? Nalu uluhlu olupheleleyo lweemvumi ezisuswe kwi-X Factor yalo nyaka ...
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga neX X Factor 2018
Zonke izinto ezenziwayo kwi-X Factor 2018 ibonisa ngoku: Amantombazana, aBafana, amaQela kunye neOvers
Bhalisela incwadana yasimahla ye-RadioTimes.com
Iveki yesi-6 kumdlalo owandulela owokugqibela: i-Acacia ne-Aaliyah
Iveki yesi-6 yangoMgqibelo owandulela owamanqam: UBrendan Murray noDanny Tetley
Iveki yesi-5: UBella Penfold kunye noShan Ako
Ngomdlalo owandulela owamanqam osondelayo - kwaye uRobbie Williams ebengekho - yayiliqela lamantombazana likaSimon Cowell elithe lafumana iingxwabangxwaba zangokuhlwa, uBella Penfold waba ngowokuqala ukuvotelwa ngaphandle kokhuphiswano, ngaphambi kokuba uShan Ako aphulukane nokucula I-Acacia kunye neAaliyah.
Ndikhe ndanolona hambo lumangalisayo kwaye ibingazukufana ngaphandle kwabo [abanye abagqatswa] kwaye kukho umntu omnye kwigumbi endifuna ukubulela ngaphezu kwakhe nabani na kwaye nguSimon Cowell, uxelele umamkeli uDermot O'Leary . Ubutshintshile ubomi bam.
Ngeli xesha, ukupheliswa kuka-Shan kwabangela ukuba uCowell atshintshe imigaqo kwaye ongeze izinto zakhe ezimbini ezinekhenketho kutyelelo oluphila.
Ukuvota esidlangalaleni kuthetha ukuba uCowell noRobbie kunye no-Ayda Williams umntu ngamnye unesenzo esinye esishiyekileyo kukhuphiswano, noLouis Tomlinson esamele umphambili uDalton Harris, u-Anthony Russell kunye noBrendan Murray.
Iveki yesi-4: Ukungaqondwa kakuhle kunye noGio Spano
Ukuhamba kukaRobbie Williams, umgwebi weendwendwe uNile Rodgers wanyanzelwa ukuba avalelise kwiqela elingaqondwanga kakuhle emva kokuba babhengezwe njengezona voti zimbalwa ebusuku.
Ngokunyaniseka ndibethwa ngumoya ngokupheleleyo, bendingayilindelanga kwaphela loo nto, uNile uxelele umamkeli uDermot O'Leary njengoko ebezibandakanya ngokungaqondakaliyo eqongeni emva kokubhengezwa kwesiphumo.
UGiovanni 'Gio' Spano naye ushiye umboniso we-ITV ngeVeki yeMuvi emva kokuba iijaji zikhethe ukumthumela ekhaya kulandela ukucula ngokuchasene neqela le-Acacia kunye neAaliyah.
Isiphumo sasithetha ukuba onke amantombazana kaSimon Cowell aseleyo kunye nabafana bakaLouis Tomlinson bakwenza ngokukhuselekileyo ngeVeki yeVidiyo.
Iveki yesi-3: UManyano Vibe kunye noMolly Scott
Nangona engazange abekho kwisithathu esingezantsi ngaphambili, iqela i-United Vibe yeza ezantsi kwivoti yoluntu kwaye bakhutshwa kwangoko kukhuphiswano.
Kwaye uMolly Scott wathunyelwa ekhaya emva kokucula kunye ne-Acacia kunye neAaliyah.
Iveki yesi-2: UJanice Robinson kunye ne-LMA Choir
Ukugqiba ezantsi ezithathu ngeveki yokuqala, uJanice Robinson wazifumana sele ephantsi kwivoti yoluntu kwaye wasuswa kwangoko kukhuphiswano.
Njengokusebenza kwenani elilandelayo leevoti, i-LMA Choir kunye noBrendan Murray emva koko kwafuneka bakhuphisane ekuculeni. Ngelixa iijaji uRobbie Williams noCowell bekhethe ukugcina i-LMA Choir, uLouis Tomlinson kunye no-Ayda Field bavotele ukugcina uMurray.
Le yantlukwano yathumela lo mboniso kwisiphithiphithi, esathi sabona i-LMA Choir yathunyelwa ekhaya emva komninimzi uDermot O'Leary etyhila ukuba iqela lifumene elona nani lisezantsi leevoti kuluntu.
Iveki yoku-1: I-Olatunji Yearwood kunye neArmstrong Martins
Imvumi yaseTrinidad u-Olatunji Yearwood wayengowokuqala ukususwa kukhuphiswano lwalo nyaka, egqibezela ezantsi kwivoti yoluntu ngengoma yakhe yoqobo ethi Jiggle It.
Kwiculo lokucula u-Armstrong Martins noJanice Robinson baya entloko, kunye neejaji ezintathu kwezine ezikhetha ukugcina uRobinson. NguLouis Tomlinson kuphela ovotele ukugcina uMartins.
nini ii-olympics 2021
leliphi ijelo lebhola ekhatywayo ngolwesine ebusuku
Uluhlu lwamadoda e-x-amadoda
indoda utd v liverpool kwi-tv
ngokungqongqo yiza ukudanisa iijaji ze-2018
I-disney kunye neshedyuli yokukhutshwa uk